Iyi ndiyo yekutanga mifananidzo chaiyo yeiyo iPhone 7? | IPhone nhau
Iyi ndiyo yekutanga mifananidzo chaiyo yeiyo iPhone 7?
Maminetsi mashoma apfuura, Geekbar yakaburitsa chingave chekutanga chaicho mifananidzo ye iPhone 7. OnLeaks yakadzokorora kubva kwaGeekbar kutumira pane French blog NoWhereElse uye anoti anofunga kuti inogona kunge iri inoshanda prototype yeiyo inotevera Apple smartphone, chishandiso icho chinozoratidzwa, kana pasina zvinoshamisira, kutanga kwaGunyana nemukoma wayo mukuru, iyo iPhone 7 Plus iyo ichasvika ine inozivikanwa mbiri mbiri kamera pakati pevamwe vakatanhamara.
Mifananidzo yacho hairatidze chero chinhu chitsva: yakakura kamera ine bump pane iyo imba inotsiva mhete iripo pane iyo iPhone 6 / 6s, kusavapo kwe3.5mm jack kwemahedhifoni uye wechipiri mutauri pazasi. Isu tinogona zvakare kuona mitsara yeiyo antenna pane ekumusoro uye ezasi micheto iyo ichiri chena, chimwe chinhu chandinotaura nekuti mushure me ichangoburwa kubva ku Unbox Therapy Ini ndaive netariro kuti mitsara iyi yaive yero yandaive pedyo negoridhe rechitunha.
IPhone 7 yakaratidzwa mumifananidzo
OnLeaks inojekesa mune yayo blog kuti Geekbar yakatoburitsa zvinhu zvakawanda munguva yakapfuura nekuvimbika kukuru, saka tinogona kuve pamberi pe mifananidzo yekutanga chaiyo yeiyo 7-inch iPhone 4.7. Geekbar timu yeChinese inozivikanwa mukugadzirisa zvigadzirwa zvemagetsi uye zvakanyanya mumidziyo yeApple. Izvo zvinokwanisika kuti vatove vatora chaicho chigadzirwa kuti vadzidze iwo mwedzi pamberi pevatanga vashandisi kunakidzwa neiyo iPhone 7.
Chinhu chakashata nezvechero ipi yemifananidzo iri kuburitswa ndeyekuti, kunyangwe vari vechokwadi kana kuti kwete, tinogona kuona mufananidzo wavo, asi ivo havatipe ruzivo nezve izvo zvichaunza mukati. Dzimwe runyerekupe dzinoti iyo iPhone 7 kamera ichave 21Mpx uye uchave neOIS, chimwe chinhu chaisawanikwa muiyo 4.7-inch iPhone kubva payakasvika muna 2014. Kune rimwe divi, runyerekupe runovimbisawo kuti ichave isina mvura, asi isu tichazofanira kumirira ingangoita mwedzi kuti tisimbise kana kuramba idzi nedzimwe runyerekupe. .
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyi ndiyo yekutanga mifananidzo chaiyo yeiyo iPhone 7?
... ine usimbe sei iPhone, zvimwe zvakafanana .. Zvinonyadzisa, isu tichafanirwa kuona zvimwe zvingangoitika, Thanks for the info 😉
Zvakanaka, zvakafanana nemamwe makambani ari muchikamu. Zvimwe zvakafanana. Kana kuti ndizvo zvawaitarisira kuti ichave nemapapiro uye kubhururuka.
Hehehe great comment pacoflo, the best of the day 🙂
Nyowani nyowani dzinosimbisa kuti iyo iPhone 7 Plus ichave iine 3 GB ye RAM
Riri risingazivikanwe Siri peji rinotiratidza zvese zvatingaite naSiri